Xiaomi Mi Mix 2S ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ | Androidsis
Xiaomi Mi Mix 2S ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အာရုန်သည် Rivas | | NOTICIAS, Android ဗားရှင်း, Xiaomi က
ယင်း၏တင်ဆက်မှုနှင့်ဖြန့်ချိမီ, Xiaomi Mi Mix 2S ကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး, ဤမျှလောက်များပြားလွန်းသဖြင့်၊ ဤအခါသမယတွင်၎င်း terminal ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်၎င်းကိုသယ်ဆောင်မည့် firmware ၏ယိုစိမ့်မှုမှတစ်ဆင့်ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ XDA-Developersကျွန်တော်တို့ကိုဒီ scoop ရှိသည်သောကျော်ကြား developer ဖိုရမ်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကအတည်ပြုသည်အတိုင်း, Mi Mix 2S သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဤမိုဘိုင်း၏ firmware မှရရှိသောအချက်အလက်များအရကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်နာမည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်း ၎င်းကိုကုဒ်နံပါတ် "Polaris" အောက်တွင်တွေ့ရသည်။။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်အချို့သောအချိန်ကာလများအတွင်းလူသိများသောကောလာဟလများနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား ကောင်းပြီ, ဆက်ဖတ်နေ!
ငါးရက်ပဲ၊ ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ဆုံးယိုစိမ့်မှုအကြောင်းကိုမင်းတို့ပြောပြနေတယ်, သောကအများအပြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူလာလိမ့်မည်ဟုညွှန်ပြခဲ့သည်ရသော Qualcomm SD 845 SoC၊ 8GB ​​RAM နှင့် 256GB Internal Memory ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်.
Xiaomi Mi Mix 2S ၏နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များသည်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်
အခုတော့ Mi Mix 2S ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီလို့ထင်ရသည့် firmware ၏အဆိုအရအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမှန်သည်၊ ဟုတ်သည်၊ ကျနော်တို့အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်ရှစ် core Snapdragon 845 (၂.၈ GHz Cortex-A75 လေးနှင့် 2.8GHz နှုန်းဖြင့် Cortex-A55 လေးခု) နှင့်အတူလာနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ယိုစိမ့်သောအချက်အလက်များအရ၎င်းတွင်ရှေ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုလုံးဝဖုံးအုပ်ထားသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ FullHD + (၂,၁၆၀ x ၁,၀၈၀ ပစ်ဇယ် resolution) ၅.၉၉ လက်မနှင့် ၁၈: ၉ အချိုးအစားအချိုးအစားရှိသည်။ , 2.160: 1.080 ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ၎င်းသည်အဓိကကင်မရာတွင် Sony IMX363 အာရုံခံကိရိယာနှင့်ပါလာလိမ့်မည်၃,၄၀၀ mAh ဘက်ထရီ၊ ရှေ့မျက်နှာပြင်တွင် LED အသေးစား၊ dual SIM အထောက်အပံ့၊ အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာများနှင့် Project Treble နှင့်အတူ Android 3.400 Oreo တို့ပါဝင်သည်။ အတွက် operating system ကို updates များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
ဒါက Xiaomi Mi Mix 2S ပါ
ထို့အပြင်အစီရင်ခံစာ၏နိဂုံးအနေဖြင့် XDA Developers မှသူများက၎င်းကိုပြောကြားသည် "ကောလာဟလများကဆိုကြသည် အဆိုပါကိရိယာသည် Artificial Intelligence လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့သည်, ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ [သက်သေပြသည့် firmware တွင်] တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Xiaomi Mi MIX 2S စတော့ကင်မရာကိုဖျက်ချပြီး Huawei Mate 10 ကမ်းလှမ်းသောအရာနှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်မြင်ကွင်းအသိအမှတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ".
ဒါကြောင့်သင်သိတဲ့ Xiaomi Mi Mix 2S ကတကယ့်အစစ်အမှန်ပါ။ ဒီနှစ်မှာတော့ဒါကိုဈေးကွက်ထဲမှာမြင်ရမှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi Mi Mix 2S ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Google Assistant သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံအများစုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်
NOMU S50 Series - ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်နှင့် Android 18 Oreo ပါသည့်ပထမဆုံးကြမ်းတမ်းသောစမတ်ဖုန်း